Baolina kitra - Amboaran’ny CAF :: Voatery hatao eny Vontovorona indray ny lalaon’ny Fosa Juniors FC sy RS Berkane • AoRaha
Baolina kitra – Amboaran’ny CAF Voatery hatao eny Vontovorona indray ny lalaon’ny Fosa Juniors FC sy RS Berkane
Niova tampoka. Lasa eny amin’ny kianja voarakotra bozaka tsy voajanahary Vontovorona indray ny Fosa Juniors FC no hifandona amin’ny RS Berkane, avy any Maraoka, raha toa ka any Mahajanga foana no handraisan’ity ekipa avy any Boeny ity ireo lalao isan-tarika. Hifandona eny Vontovorona ny ekipa roa tonta amin’ny 27 oktobra izao, ao anatin’ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasioan afrikanina (Caf). “Mila miala eto Madagasikara amin’ny alatsinainy aorian’ny lalao ireo mpilalao maraokana. Ny sidina any Mahajanga mankaty Antananarivo anefa tsy misy amin’io alatsinainy io. Sarotra ny hampiandry azy ireo ka voatery hikarakara an’ilay lalao eto Antananarivo izahay”, hoy i Ando Harivola, sekretera jeneralin’ny klioba Fosa Juniors FC.
Tombony ho an’ny mpilalao ihany koa ny hanatanterahana ny lalao eto amin’ny renivohitra raha ny fanazavana nampian-dRasoanaivo Titi, mpanazatra an’ity ekipa tompondaka malagasy ity. “Fohy ny fotoana manelanelana ny lalao mandroso sy ny miverina. Lany fotoana eny an-dalana sady reraka ireo mpilalao raha mbola any Mahajanga no hatao ny fifandonana no hatao”, hoy Rasoanaivo Titi, nanamafy ny fanazavana.
Namakafaka sy nandinika ny mikasika an’ity klioba maraokana ity itsy mpanazatra itsy hatramin’ny nahafantarana fa hiatrika ny RS Berkane ny Fosa Juniors FC. “Ekipa niaka-danja eo amin’ny sehatra afrikana ny RS Berkane. Isan’ny nandray anjara tamin’ny lalao famaranana tamin’ny fiadiana ny amboaran’ny Caf ireo mpilalaony, tamin’ny taona 2019, izay nihanany tamin’ny Zamalek, Ejipta”, hoy izy.
Manana ny maha izy azy ny ekipa hifanandrina amin’ny klioba malagasy. “Natao amin’ny kianja voarakotra bozaka tsy voajanahary ny lalao satria efa zatra milalao amin’izany ny Fosa Juniors FC”, hoy Rasoanaivo Titi. Naharitra herinandro ny fiverenan’ny ekipa tamin’ny fampivondronana teny amin’ny kianja Elgeco Plus ByPass raha toa ka vao ny alarobia lasa teo izy ireo vao nizatra ny kianja tao Vontovorona.